गायक प्रकाश कटुवाल प’क्राउ ! « Dhankuta Khabar
गायक प्रकाश कटुवाल प’क्राउ !
प्रकाशित मिति : 17 February, 2020
तनहुँ:बन्दीपुर गाउँपालिका डुम्रेका होटल व्यवसायी लालकाजी गुरुङ माथि आ’क्रमण गरेको अ’भियोगमा लोकदोहोरी गायक प्रकाश कटुवाल प’क्राउ परेका छन्। गायक कटुवाल वि’रुद्ध ज्या’न मा’र्ने उद्योग मुद्दाा दर्ता गरिएको छ। गुरुङ की छोरी सोनीकाले सोमबार गायक कटुवाल वि’रुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा किटानी जा’हेरी दिएपछि कटुवाललाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको जनाएको छ।
जाहेरीसँगै गायक कटुवाल लाई प्रहरी हि’रासतमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिलवालले जानकारी दिए । सिलवालले गायक कटुवाल वि’रुद्ध ज्या’न मा’र्ने उद्योगमा जा’हेरी दर्ता भएको बताए । उनका अनसार डुम्रेका ब्यब सायीहरुले आइतबार देखि गायक कटुवाल वि’रुद्ध जा’हेरी दिने प्रयास गरेका थिए। तर प्रहरीले सोमबार मात्रै जा’हेरी दर्ता गरेको हो।
शनि बार पोखरा जाने क्रममा गायक कटुवालकी श्रीमतीले डाँफे होटल अगाडी बा’न्ता गरेपछि त्यही निहुँमा होटल सञ्चालक गुरुङ र गायक कटुवाल बीच सामान्य वि’वाद भएको थियो। केही समयको वि’वाद पछि दुई पक्ष बीच सहमति भई मिलापत्र भएर गायक पोखरा गएका स्रोतले जनाएको छ। साँझ घरमा खाना खाइरहेको अवस्थामा व्यवसायी गुरुङलाई मा’स्क लगाएर मोटरसाइकलमा आएका दुई व्यक्तिले एक्कासी र’डले आ’क्रमण गरेर ग’म्भीर घा’इते बनाएका छन्।
घा’इते गुरुङको काठमाडौंस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक सिलवालले बताए। उनका अनुसार गुरुङको अवस्था ग’म्भीर छ। आ’क्रमणमा गायक कटुवाल सं’लग्न भएको आ’रोप पी’डितका परिवारले लगाएका छन्। त्यही आ’रोप मा उनी वि’रुद्ध ज्यान मा’र्ने उद्योगमा मु’द्दा दर्ता भएको थियो।
नेपाल आइडलको टप ५ बाट को बा,हिरए त – हेर्नुहोस् आजको एपिसोड (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नेपालकै चर्चित रियालीटी शो ‘नेपाल आइडलको तेश्रो संस्करण प्रसारण भईरहेकोछ ।